ISouthwest Airlines ivimbela izilwane ezisekela imizwa
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » ISouthwest Airlines ivimbela izilwane ezisekela imizwa
Airlines • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
Kusukela ngoMashi 1, 2021, iSouthwest Airlines izokwamukela izinja zensizakalo eziqeqeshiwe kuphela zokuhamba futhi ngeke zisathutha izilwane ezisekela imizwa.
ISouthwest Airlines Co namuhla imemezele ukuthi, ngokuhambisana nemithethonqubo emisha evela eMnyangweni Wezokuthutha wase-US (i-DOT), inkampani ethwala izinguquko yenza izinqubomgomo zayo maqondana nezilwane eziqeqeshiwe nezilwane ezixhasa imizwa. Kusukela ngoMashi 1, 2021, inkampani yezindiza izokwamukela izinja zensizakalo eziqeqeshiwe kuphela zokuhamba futhi ngeke isathutha izilwane ezisekela imizwa.
Ngalesi sibuyekezo, I-Southwest Airlines kuzovumela kuphela izinja zensizakalo eziqeqeshwe ngazinye ukwenza umsebenzi noma ukwenza imisebenzi ukuze kuzuze umuntu oqeqeshiwe onokukhubazeka ukuhamba neKhasimende. Izinhlobo zokukhubazeka zifaka ukukhubazeka ngokomzimba, kwezinzwa, kwengqondo, kokuqonda, noma kokunye ukukhubazeka kwengqondo futhi yizinja kuphela ezizokwamukelwa (kufaka phakathi lezo zensizakalo yezengqondo) - azikho ezinye izinhlobo ezizokwamukelwa njengesilwane sosizo esiqeqeshiwe.
“Siyishayela ihlombe i- UMnyango WezokuthuthaIsinqumo sakamuva esivumela ukuthi senze lezi zinguquko ezibalulekile ukubhekana nezinkinga eziningi eziphakanyiswe umphakathi nabasebenzi bezindiza mayelana nokuthuthwa kwezilwane ezingaqeqeshiwe ezindlini zezindiza, ”kusho uSteve Goldberg, iSekela likaMongameli oPhezulu, i-Operations and Hospitality. "ISouthwest Airlines iyaqhubeka nokuxhasa amandla abantu abaqeqeshiwe abakhubazekile ukuletha izinja eziqeqeshiwe zokuhamba futhi ihlala izibophezele ekuhlinzekeni ngohambo oluhle nolutholakalayo lwawo wonke Amakhasimende ethu akhubazekile."
Njengengxenye yalolu shintsho, Amakhasimende ahamba nezinja zensizakalo eziqeqeshiwe manje kufanele anikeze ifomu eliphelele, nelinembile, le-DOT Service Animal Air Transportation Form esangweni noma kwikhawunta yamathikithi osukwini lwabo lokuhamba ukuqinisekisa impilo yesilwane, ukusebenza, nokuqeqeshwa. Amakhasimende kufanele agcwalise ifomu, elizotholakala kuwebhusayithi yezindiza nasezindaweni zezindiza, ngemuva kokubekisa uhambo lwabo.
Ngokwengeziwe, iNingizimu-ntshonalanga ngeke isavuma izilwane ezisekela ngokomzwelo ukuhamba ngempumelelo ngoMashi 1, 2021. Amakhasimende asengaqhubeka nokuhamba nezinye izilwane njengengxenye yohlelo lwezilwane ezifuywayo olukhona lwezindiza ukuze zikhokhiswe; kodwa-ke, izilwane kufanele zihlangabezane nazo zonke izidingo ezisebenzayo maqondana nezitokisi zasendlini nezinhlobo (izinja namakati kuphela).
Amakhasimende abamba ukubhuka okukhona kokuhamba nezilwane ezingamukeleki ngemuva kukaFeb. 28, 2021 angaxhumana neNingizimu-ntshonalanga ukuthola eminye imininingwane nosizo.
I-COVID-19 Spike isongela i-UK Domestic Travel Recovery
Ukuzamazama Komhlaba Okunamandla kusanda kuqoshwa esiQhingini sase ...
Izimbadada, Wyndham, Marriott & Hilton: I-American ...
Kubulawe amaMarines amane aseMelika, ama-Afghani angama-4 ngesikhathi kuhlaselwa iKabul ...